Sea Lion South - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Lorie
U-Lorie Ungumbungazi ovelele
Ifulethi lesitudiyo elinombhede ongusayizi wendlovukazi, ukugeza okugcwele kanye nezinsiza zasekhishini. Ukubuka okuhle kwe-Kachemak Bay, izintaba ezizungezile nezinguzunga zeqhwa. Khona enhliziyweni yomlando we-Homer Spit. Isiqandisi, i-microwave, i-hot plate, ikhofi, ihhavini le-toaster nawo wonke amabhodwe namapani adingekayo. Ilungele uhambo lokudoba ngamaphupho, impelasonto yokubona indawo, indlela yothando noma ukukama olwandle nokuthenga. Ukubuka okumangalisayo okuvela emphemeni.
I-Sea Lion Cove inikeza amafulethi amabili asebenza kahle atholakala ogwini lolwandle lwe-Homer Spit, eHomer, e-Alaska. Isitezi sesibili se-Sea Lion Fine Art Gallery. Iyunithi ngayinye ingamamitha-skwele angama-330, inebhavu eligcwele (iyunithi yaseNingizimu inobhavu oshisayo), ikhishi nendawo yokulala ehlukaniswe ikhethini. Iyunithi yaseNyakatho inombhede wendlovukazi kanye nosayizi "ogcwele" we-futon eningizimu umbhede wosayizi wendlovukazi. Ikhishi line-microwave, amapuleti ashisayo, ifriji, umenzi wekhofi kanye nekhawunta enosinki nezinto zokupheka. Kunendawo yokudlela enetafula nezihlalo. Umbono uyamangalisa futhi uhlanganisa ulwandle olugcwele olunezintaba ezicwebezelayo kanye nentaba-mlilo esebenzayo "Mt. Augustine". Ungakwazi ukujabulela ukubuka ngaphakathi ngokusebenzisa iminyango ye-patio ephindwe kabili noma kusukela ezihlalweni ezisemphemeni wangaphandle. Sine-inthanethi esheshayo yokusakaza-bukhoma i-HD kumadivayisi amaningi
Indawo iphelele! Yindawo ethule yokuphumula nokulala. Imisindo yolwandle nokushona kwelanga okuhlala isikhathi eside kuzokuphelezela futhi kusethe isimo sakho sengqondo ukuze ube nobusuku obunokuthula. Uzovuka usuvuselelwe!
ULorie Ungumbungazi ovelele